Sedex Qodob oo lagu tuhmaayo ineey Xukuumada la maagantahy Xildhibaanada & Walaaca beesha caalamka ooo….. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sedex Qodob oo lagu tuhmaayo ineey Xukuumada la maagantahy Xildhibaanada & Walaaca beesha caalamka ooo…..
Ahmed weheliye Gaashaan 29 May 2018
Muqdiaho ( Mareeg News ) Gudoomiyaha maxkamada sare Ee jamhuuriyada Federaalka soomaaliya Gar yaqaan ibraahim iidle Sulewymaan ayaa cadeeyay in aan sifa sharci ah loo samiran xil ka qaadiistiida.
Sharciyaaqano iyo siyaasiin caalami ah iyo kuwa Soomaali ah labada ba ayaa dowlada hada joogta sheegay ineey ka maagantahy xilkaqaadista gudoomiyaha Maxkamada sare Xadgudub awood maroogsi ah.
Sharciyaqaanada ayaa doodooda ku sheegay in xukuumada tan iyo imaatinkeedii ku mashquulsantahy Sidii ay u badali laheeyd dhamaan nidaamyadii dastuuriga ahaa ee ay dhisee dowladihii ka horeeyay, iyadoo adeeg saneeysa wada kasto oo aay ku Baa bi’in karto awoodaha lamaha kale ee doowlada.
Qodobada ay dowlada ku tuhmeeyn ayaa kala ah.
1- Gudoonka baarlamaanka oo ay xukuumada xilka katuurtay in loo riday sabab la xiriirta damaca xukuumada ay ku dooneeyso ineey ka taqalusto oo ay ka itaal roonaato xildhibaanada mucaaradka ah ee ku jira baarlamaanka JFS.
2- Riditaanka gudoomiyaha aqalka sare iyo keenitaan gudoomiyahan cusub ayeey iyana ku sheegeen in xukuumadu doneeyso ineey meesha ka saarto awooda maxkamada sare ee ka hor imaan kartay howla laanta fulinta ay ku dooneeyso ineey isga yareeyso cadaadiska Mucaaradka.
3- Maxakada sare ayeey sheegeen Sharciyaqaanada ineey u gogol xaareeyso Awood aan caadi aheeyn oo ay yeelato laanta fulinta taasoo ka saacida in la waayo cid ka hortimaada go’aanadooda siyaasadee.
Arimahaan iyo kuwa kale oo badan ayeey sharciyaqaanadu ku tuhmayaan dowlada hada jirta, Dowlada mud farmaajo tan iyo imaatinkeeda waxeey ku mashquul santahy ayaa la leeyahay ka taqalusida dhamaan siyaasada ka hor imaaneysa siyaaaadooda.
Wasiir ka tirsan Somaliland oo sabab la yaab leh u xaraashay guryahiisa kana soo jeeda Puntland
Arin shaki gelisay caalamka oo Boqortooyada Sacuudiga lagu Eedeeyay…